Maonero eGeospatial uye SuperMap
Geofumadas yakataurirana naWang Haitao, Mutevedzeri weMutungamiriri weSuperMap International, kuti vaone pekutanga mhinduro dzese munzvimbo ye geospatial, inopihwa neSuperMap Software Co, Ltd. kubva kuChina GIS mupi SuperMap Software Co., Ltd.inogadzira mupi we ...
Kushandisa kweGIS kuronga nekudzivirira Dengue
Muchimiro chedu cheMesoamerican uye nharaunda dzinopisa dzenyika, Dengue chirwere chakajairika mumwedzi yemwaka wemvura. Kuziva uko kune huwandu hwepamusoro hwezviitiko zvirikuitika zvirokwazvo chiitiko mune izvo GIS kunyorera zvinopa zvakakosha mhedzisiro. Ndinoyeuka pandakanga ndiri mudiki, dengue yakanga isiri ...
Supergeo inobatanidza GPS PL kuti ipe turnkey solutions yeIOS
SuperGeo Technologies, yakazivisa kudyidzana kunonakidza neGPS PL, modhi yebasa inokwezva uye iri kusimudzirwa zuva rega rega nemakambani ayo panzvimbo yekukwikwidza misika, anoita synergies mukutsvaga chiitiko chiri nani kune vashandisi. Makambani ese ari maviri anopa GIS mhinduro dzemafoni nhare, nekuda kwavo…
2014 - Kufungidzira kupfupi kwechiitiko cheGeo
Yasvika nguva yekuvhara peji rino, uye sezvazvinoitika mutsika yeavo vedu vanovhara mwaka wegore, ini ndinodonhedza mitsara mishoma yezvataigona kutarisira muna 2014. Tichataura zvimwe gare gare asi nhasi chete, rinova gore rekupedzisira: Kusiyana nedzimwe sainzi , mune yedu, maitiro anotsanangurwa nedenderedzwa ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, siyana GIS, Microstation-Bentley, SuperGIS, UDig, dzakawanda
GIS GIS Pro yakanakisisa chikumbiro paiPad?
Vhiki rapfuura ndanga ndichitaura neshamwari yekuCanada iyo yakandiudza nezve ruzivo rwavakawana vachishandisa GIS Pro mukuongorora kwecadastral. Isu tave kuda kusvika pamhedziso yekuti kunyangwe paine zvimwe zvishandiso, kubva pane zviri muApp Store izvi kana zvisiri zvakanakira iOS, iyo ...
VanaChiremba vezvirwere zvese ipad
Tikaenzanisa pakati ArcGIS uye SuperGIS (zvino Spanish)
Iyo OpenSource yakakura iine maturusi akadai se gvSIG uye Quantum GIS, ichiwana chikamu chechikamu chakawanda chemusika icho chinomiririra software ye geomatics. SuperGIS ndeimwe yemashandisirwo emidziyo, iyo pamubhadharo wakaderera unozvimisa pamberi pemaraini yakawandisa iyo ESRI yanga yasvika.
3 nhau kubva ku Supergeo
Kubva kuvakagadziri veiyo SuperGIS modhi tinowana dzimwe nhau dzakakodzera kununura.Fujairah Madhipatimendi ePublic Works uye Zvekurima Inovandudza kugadzikana kwezvivakwa neSuperGISFujairah imwe yeUnited Arab Emirates, kuMiddle East. Ivo vafunga kuita SuperGIS matekinoroji manejimendi eiyo mamiriro ehupenyu hwekutenderera, ...
GPS paIndonesia, SuperSurv ndiyo imwe gia yakawanda yeGIS
SuperSurv chishandiso chakanyatso gadzirirwa GPS paApple, sechishandiso chinobatanidza kushanda kweGIS iyo data inogona kutorwa mumunda zvakanaka uye nehupfumi. GPS pane Android Iyo yazvino vhezheni, SuperSurv 3 inoshandura nhare kuita mukokeri, ine geopositioning, mepu kuratidza, kubvunza, kuyera uye kuongorora ...
VanaChiremba vezvirwere zvese SuperGIS
GPS / Equipment, kuororwa, SuperGIS
SuperGIS Desktop, kumwe kuenzanisa ...
SuperGIS chikamu cheiyo Supergeo modhi yandakataura nezvayo mazuva mashoma apfuura, nekubudirira kwakanaka mukondinendi yeAsia. Mushure mekuyiyedza, heano mamwe emafungiro andakatora. Pakazara, zvinongoita nezve chero chimwe chirongwa chinokwikwidza chinoita. Inogona chete kumhanyisa paWindows, pamwe inogadzirwa paC ++, ye ...
ESRI gvSIG Os Kml siyana GIS Shp
SuperGIS, maonero ekutanga
Mumamiriro edu ekumadokero SuperGIS haina kuwana chinzvimbo chakakosha, zvakadaro muEast, tichitaura nezvenyika dzakaita seIndia, China, Taiwan, Singapoore - kungodoma mashoma- SuperGIS ine chinzvimbo chinonakidza. Ini ndaronga kuyedza zvishandiso izvi muna 2013 sezvandakaita negvSIG uye Manifold GIS; tichienzanisa mashandiro ayo; for now…
Geospatial - GIS, kuororwa, SuperGIS
Kosi - Sketchup Modeling
Sketchup Modeling AulaGEO inopa iyo 3D modelling kosi neSketchup, chishandiso chekufungidzira mafomu ese ekuvaka ...
Mafashama modelling uye ongororo kosi - uchishandisa HEC-RAS uye ArcGIS
Tsvaga izvo zvinogoneka zveHec-RAS uye Hec-GeoRAS yema modhi modelling uye mafashamo ongororo #hecras Iyi inoshanda ...
Webhu-GIS kosi ine yakavhurika sosi software uye ArcPy yeArcGIS Pro
AulaGEO inopa kosi iyi yakanangana nekusimudzira uye kudyidzana kwenzvimbo dzenzvimbo yekuitwa kweInternet ....